AmaQela aDityanisiweyo weNtengiso yeNtengiso | Martech Zone
NgoMgqibelo, nge-22 kaFebruwari ngo-2014 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
I-LinkedIn kudala ingumthombo oqinileyo weshishini kubarhwebi beshishini nakwiminyango yokuthengisa ukuze bafumane kwaye banxibelelane namathemba abo kunye nabathengi. Ikwalilo iqonga elihle lokubandakanya kwizicwangciso zomxholo wakho. Ingcebiso yethu kudala ikukuba abathengisi kunye nabathengisi babekho apho abaphulaphuli… abaphulaphuli banokufumaneka rhoqo kuyo AmaQela aDibeneyo.
Amaqela e-LinkedIn abonelela ngendawo yeengcali kwishishini elinye okanye abanomdla ofanayo ekwabelaneni ngomxholo, ukufumana iimpendulo, ukuthumela kunye nokujonga imisebenzi, ukwenza abafowunelwa kwezoshishino, kunye nokuzibeka njengeengcali zeshishini. Unokufumana amaqela ukuze ujoyine ngokusebenzisa indawo yokukhangela phezulu kwiphepha lakho lasekhaya okanye ujonge iingcebiso zamaqela onokuwathanda. Unokwenza iqela elitsha elijolise kwisihloko esithile okanye kumzi mveliso.
Le infographic ichaza indlela i-LinkedIn Groups ejika ngayo ibe sisixhobo sakho semfihlo sempumelelo yokuthengisa!
tags: b2bIshishini kwishishiniLinkedInamaqela adityanisiweyo
Isithuba esihle Doug, Ubeka kunye [infographic] enkulu. Enye indawo endiyijonge kakhulu licandelo lesimo. Ibekwe phi kanye loo nto?
Mar 18, 2014 ngo-6: 37 AM
Great Blog,,, edityanisiweyo-in idlala indima ebalulekileyo ekwakheni ubudlelwane nabathengi kunye nengxoxo yeqela phezu kwimiba eyahlukeneyo.
Mar 18, 2014 ngo-6: 45 AM
Vumelana nawe..ukuvelisa izikhokelo kubalulekile kubo bonke abaphathi bophuhliso lweshishini kuphuhliso lombutho kwaye baqhagamshelwe ngaphakathi kuya kubanceda kakhulu ukuba sinokufumana iingcali zoshishino ezahlukeneyo bayakunxibelelana nabo kwaye bakhuthaze iimveliso zoshishino.